समुन्द्र राज घिमिरे काठमाडौं, फागुन २९ print
आकाशको रङ नीलो छ, बादलको सेतो। कहिलेकाहिँ बादल राता–पहेँला र काला पनि बन्छन्। तर, आकाश र बादलका यी रङभन्दा विशेष आकर्षण आकाशमै छ। जुन निकै कम देखिन्छ तर, हाम्रा आँखालाई निमेषमै तानिदिन्छ।
त्यो हो– इन्द्रेणी।
इन्द्रेणीको रङ नै त्यस्तै छ, त्यसमा आकर्षक चिज खोज्न मनलाई गहिराइतिर डुबाइराख्नु पर्दैन। किनकि, त्यो रङ्गीचङ्गी छ। रङ खुट्याउन नसक्ने आँखालाई कुनै न कुनै रङले लोभ्याइहाल्छन्।
फिल्म सेलिब्रेटी त्यस्तै रंगीन हुन्छन्!
जसरी सूर्यको प्रकाश पर्दा बादलले अर्कै रङ लिन्छ, पानीका कणहरुको बाक्लो जुलुसमा सूर्यका धारिला किरण छिर्दा सप्तरङ्गी धनुषमा हाम्रा आँखाहरु अनायासै सोझिन्छन्।
फिल्म सेलिब्रेटी पनि त्यस्तै हुन्।
समाजका बिभिन्न रङका चरित्रलाई आफूमा घुलाउँदा उनीहरु बहुरङ्गी बन्छन्। उनीहरु सकेसम्म आफूलाई आकर्षणको केन्द्रमै राख्न चाहन्छन्। चाहे कलाले होस्, चाहे बाहिरी आवरणमा बिभिन्न रङले पोतिएर।
नेपाली फिल्म उद्योगको कुनै जमानाकी ‘सुपरहिट’ अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर आकर्षक अभिनेत्री मानिन्छिन्। बहुसंख्यकले दिएको उपाधि ‘एभरग्रिन’ अभिनेत्री ‘कलरफुल’ छिन्। किशोरावस्थाको सुरुवाती उमेरमै नायिका भएर फिल्मवृत्तमा भित्रिएकी ‘बुनु केसी’ नामले समेत रङ फे¥यो र करिश्मा मानन्धर भइन्। फिल्म अभिनेत्री, निर्मात्री हुँदै अचेल राजनीतिमा समेत उनको रङले बेला–बेला तरङ्ग ल्याउँछ!
अभिनेत्रीको रङ छनौट भने ‘ब्लाक एण्ड ह्वाइट’ तिर छ। फागुपूर्णिमा आफ्नै घरमा मनाउने चटारोमा रहेकी ‘कलरफुल’ करिश्मा भन्छिन्, ‘सेतोमा जस्तो रङ पनि चहकिलो देखिन्छ। कालोले सबैलाई ढाक्छ।’
रसरङको क्षेत्र जति देखाउनु पर्ने दुनियाँ हो, त्यति नै लुकाउनु पर्ने दुनियाँ पनि हो। हेर्न चाहनेहरुका अगाडि रहस्यमयी बन्नुपर्ने दुनियाँ हो। नदेखाए बिलाइ जाने डर हुन्छ। देखाउन नजाने रहस्य भंग हुन्छ। जसरी छताछुल्ल पोखिएको पानीको बहावले सही दिशा नसमात्न सक्छ। ‘खुल्ला किताब’का जुनसुकै पानामा पनि थुक चोबिएका औंलाका दाग लतपतिन सक्छन्।
‘कतिपय कुराहरुलाई पर्दापछाडि नै रहन दिए सुन्दर हुन्छ,’ करिश्मा भन्छिन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा कालो पर्दा बढी उपयोगी हुन्छ। यो सेलिब्रेटीका हकमा मात्र होइन, हरेक मान्छेको जीवनमा लागु हुन्छ भन्ने लाग्छ।’
लामो समयदेखि शरीरलाई फिट राख्न योग र मनलाई सफा राख्न आध्यात्मिक अभ्यास गर्दै आएकी अभिनेत्री आफ्नो मनलाई सकेसम्म सेतो रङसँग मात्रै तुलना हुने बनाइराख्न चाहन्छिन्। सेतो रङलाई शुद्धताको प्रतीक मान्ने उनी मन शुद्ध भए जीवन सरल हुने ठान्छिन्। सरल अर्थात् हलुका। खुसी भए मन र शरीर हलुका र अर्थपूर्ण हुन्छ, दुःखी भए बोझिलो र अर्थहीन। साना चिजहरु हलुका तर, गहिरा अर्थ लाग्ने हुन सक्छन्।
‘मान्छेलाई खुसी हुन बहाना चाहिन्छ,’ करिश्मा भन्छिन्, ‘स–सानै कुराले पनि मान्छेलाई खुसी बनाइराख्छ। मलाई खुसी हुन ठूलो बहाना चाहिँदैन।’
होली ठूलो चाडमध्येको एक हो। यो दिन करिश्माका लागि खुसीका स–साना बहाना भेट्ने ठूलो चाड हो। करिब डेढ दशक भयो, करिश्माले आफ्नै घरमा विशेष रुपले होली मनाउन सुरु गरेको। फिल्मक्षेत्रको व्यस्त दैनिकीमा नयाँ–पुराना दौंतरीसँगको भेटघाट, नयाँ चिनजान नै करिश्मा खुसी हुने बहाना हुन्। होली करिश्माका लागि ठूलो बोझ हट्ने उत्सव हो।
‘रङका छुट्टाछुट्टै अर्थ हुन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘कसैले मन पराउने रङसँग उसको मनोविज्ञान जोडिन्छ। होलीका रङहरुले रमाइलोको अर्थ दिन्छन्। अर्को मान्छेसँग जस्तो व्यवहार ग¥यो, बदलामा त्यस्तै पाइन्छ भन्छन्। फागुका दिन सबै खुसी हुन्छन्। रमाइला हुन्छन्। सबै खुसी हुँदा एकापसमा साटासाट हुन्छ।’
करिश्मालाई जाडो मन पर्दैन। डाँडा र जंगलछेउको गोदावरी तुलनात्मक रुपमा चिसो छ। चिसो महिना करिश्माका लागि बोझ बनेर आउँछन्। शरीर बाक्ला लुगाले ढाकिएर चुपचाप बस्न मात्र रुचाउँछन्। करिश्मालाई जाँगर मन पर्छ। तर, चिसो महिनामा करिश्माका जाँगरको पारो स्वाट्टै तल झर्छ।
हुन त करिश्मालाई तिहार सबैभन्दा मन पर्ने चाड हो। किनकि, यो पनि होलीजत्तिकै रंगीन हुन्छ। तिहार सम्झिनेबित्तिकै सप्तरंगी टीका र रंगोलीका झल्को आँखाभरि नाचिहाल्छन्। सङ्लो या सेतो रङको पृष्ठभूमिमा रंगोली आकर्षक देखिन्छ। उनलाई मन पर्ने चाडसँगै उनलाई मन नपर्ने मौसम सुरु हुन्छ। हातखुट्टा कक्रक्क पर्न थाल्छन्। शरीर अल्छी बन्छ।
जब होली नजिकिँदै जान्छ, करिश्माको जाँगर ह्वात्तै माथि चढिहाल्छ। जाँगरको बाधक मौसम हट्ने त छँदैछ, रङ्गीचङ्गी दिनको कल्पनामा उनको मन र शरीर भुवाझैं हल्का बन्न थाल्छन्।
होली आउनु एक साताअगावै गुरू/दिदी/दाइ पुस्तादेखि चेला/चेली/बहिनी/भाइ पुस्तासम्मलाई फोन घुमाउन थाल्छिन्। खुसी साट्न आफ्नै घरमा आउन निम्ता दिँदा नै उनमा जाँगर भरिन थाल्छ।
फिल्मवृत्तका धेरै कलाकारकी ‘दिदी’ अभिनेत्री करिश्माको फिल्मी करियरदेखि राजनीतिसम्मलाई हेर्दा उनी आफ्नो करियरलाई ‘कलरफुल’ मान्छिन्। फिल्मक्षेत्रले ५० वर्ष उमेर पुरा ग¥यो, त्यसको आधी उमेरभरि अटाएकी करिश्मा अझैसम्म रङ्गीन छिन्। सेतो रङ मन पराए पनि रङ्गीचङ्गी हेर्न भने खुबै मन पर्छ उनलाई, त्यसैले त रङ्गिन दुनियाँ छानिन्! सेतो रङ पृष्ठभूमिमा हुँदा अरु रङहरु बढी उज्याला देखिन्छन्। त्यसैले होलीका दिन उनी सेतै रङको कपडामा सजिन्छिन्।
उनी आफ्नो घरलाई पनि सेतो रङजस्तै शुद्ध मान्छिन्। ‘सेलिब्रेटी’को घर भए पनि उस्तो तामझाम छैन। सादा छ। सादामा रङहरु गाढा देखिने भइहाले। उनको घरको होली गाढा रङ्गीन बन्छ। होलीका दिन उनको घरमा बिभिन्न चर्चित अनुहारका रङहरुको ‘इन्द्रेणी’ पर्छ!
विशेष आगन्तुकहरुलाई गेटसम्मै लिन आइपुग्छिन्। हातमा रङ–रङका रङ हुन्छन्। आगन्तुकअनुसार कसैलाई हात जोडेर नमस्कार, कसैसँग अंकमाल त कसैसँग गाला जोड्दै चुम्बन गर्ने उनको स्वागतशैली छ। यति गरिसकेपछि आगन्तुकको इच्छाबमोजिम मात्र गाला वा निधारमा रङ दलिदिन्छिन्। आगन्तुकले पनि उसैगरी फिर्ता दिन्छन्। दिउँसो १२ देखि साँझ पाँच बजेसम्म करिश्मा यस्तै क्रियाकलापमा मग्न हुन्छिन्। गाउँछिन्, उफ्रिन्छिन्। अन्तरवार्ता दिन पनि भ्याइनभ्याइ हुन्छ।
किनकि, करिश्माको घरको होली फिल्मवृत्तको ‘ब्राण्डेड होली फेस्टिभल’ हो।
करिश्माको घर भन्नेबित्तिकै गोदावरी भन्ने सामान्य मान्छेलाई पनि थाहा छ। गोदावरी जाँदा यात्रुदेखि सहचालकसम्मले ‘करिश्माको घर’लाई ‘स्टेसन’ बनाएका छन्। त्यसैले करिश्माको घर पनि एउटा ब्राण्ड हो। जसरी बलिउड स्टारहरुका घर चर्चित छन्, नेपाली फिल्मवृत्तमा करिश्मा एक्ली अभिनेत्री हुन्, जसको घर चर्चित छ।
गोदावरीमा १२ वर्षे मेला लाग्छ। काठमाडौंनजिकको सबैभन्दा व्यस्त पिकनिक स्पट गोदावरीमै छ। पर्यटकीयस्थल भएकाले घुम्न जानेहरुको चहलपहल उत्तिकै हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहिँ त्यो बाटो निकै हल्लाले भरिन्छ। करिश्मालाई शान्त मन पर्छ। हल्ला हुन थाले घरको पछाडिको भागतिर बस्छिन्। हल्ला उनलाई मन पर्दैन तर, कसैले चिच्याउँदै ‘ऊ यही हो करिश्माको घर’ भन्दा उनलाई बिछट्टै खुसी लाग्छ।
उनको घर कहाँसम्मका मान्छेलाई थाहा रहेछ भने, एकचोटी दाङबाट १४ वर्षे किशोरी करिश्माको ढोकैअघि टुप्लुक्क आइपुगिन्। करिब दुई वर्षअघिको कुरा हो, ती किशोरीले करिश्माको घर गोदावरी हो भन्ने सुनेकी रहिछन्। करिश्मालाई भेट्नकै लागि उनी दाङबाट एक्लै आएको ती युवतीले बताइन्।
आफ्नो बाबुआमा कोही नभएको, काठमाडौंमै काम गर्न आएको बताएपछि करिश्माले ती किशोरी गलत व्यक्तिको हातमा पर्न सक्ने ठान्दै माइती नेपाललाई बुझाइदिइन्। माइती नेपालले आश्रय दियो। उनको ठेगाना र आफन्तबारे सोधखोज ग¥यो। तर, ती किशोरीले झुट बोलेकी रहिछन्। उनका बाबुआमा खोजिरहेको पत्ता लागेपछि माइती नेपालले उनलाई घर फर्किाइदियो। खासमा, ती किशोरीको बयानमा उनी करिश्मालाई नै भेट्न आएकी थिइन्।
घर धेरैलाई थाहा भएका कारण करिश्माले कहिलेकाहिँ निकै झमेला पनि व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ। ‘करिश्मा मानन्धरको घर कस्तो रहेछ, हेर्न आएको’ भन्दै बेला–बेला मान्छेहरु गेटभित्र छिरिरहन्छन्। हुन त उनको घरनजिकै प्रहरी बिट छ। त्यस्तो आपत परे प्रहरी टुप्लुक्क आइपुगिहाल्छन्।
कहिलेकाहिँ यसरी फ्यानहरुसँग आत्मीय सम्बन्ध पनि बनेको रहेछ। केही वर्षअघि दुई बच्चाकी आमा उनलाई खोज्दै आइपुगिन्। सानो छँदा करिश्माको फिल्म हेरेदेखि ‘करिश्मा कस्तो घरमा बस्लिन्, के खालिन्’ जस्ता जिज्ञासा मनमा खेलिरहेको बताउनी ती महिलाको कथा सुन्न थालिन्, करिश्माका आँखाबाट आँशु नै झरे। चार घण्टासम्म उनको कथा सुनिरहिन्। ती महिलालाई दलालले भारत लगेर झन्डै बेचिदिएका रहेछन्। अहिले पनि करिश्मा र ती महिलाको फोनसम्पर्क हुन्छ। करिश्मा हिम्मत नहार्न ढाडस दिइरहन्छिन्।
यसरी घर चर्चित हुनुको मुख्य कारण होली नै भएको करिश्माको अन्दाज छ।
होलीका दिन उनको घरअगाडिको बाटो जाम नै हुन्छ। अहिले त बिभिन्न ब्राण्डहरुले आफ्नो प्रचारका लागि होली कार्यक्रम राख्छन्। करिश्माको घरमा भने दुई वर्षयता आफ्नो प्रचार गर्न ‘व्यापारिक ब्राण्ड’हरु पछि लागेका छन्।
करिश्माले आफ्नो घरमा सुरु गर्दा निकै कम होली कार्यक्रम हुन्थे। फिल्म सेलिब्रेटीहरुको जमघट थलो करिश्माको घर नै थियो। अचेल फिल्मवृत्तमै थुप्रै होली कार्यक्रम हुन्छन्। मान्छे बाँडिने भइहाले।
‘जति धेरै भए पनि करिश्माको घरमा एकैछिन भए पनि पुग्नैपर्छ है भन्नेचाहिँ बनेको छ,’ करिश्मा सुनाउँछिन्, ‘अब त बानी नै बसिसक्यो। म रहुन्जेल र सकुन्जेल घरमै होली मनाउनेछु।’
करिश्माले आफ्नो घरमा यसरी होली मनाउन थालेको डेढ दशक बितिसक्यो। विनोद मानन्धरसँग बिहे भएपछि उनी लाजिम्पाट बस्थिन्। त्यतिबेला उनी व्यस्त अभिनेत्री थिइन्। व्यस्त भएपछि साथीसँग नियमित भेट टुट्यो।
करिश्मा पति तथा निर्माता विनोद मानन्धर ‘रमाइलो मुड’का मान्छे हुन्। विनोदसँग होली चाड यसरी जोडिएको छ कि, उनी आफ्नो जन्मगते नै भुल्छन्। आमाबाट सुनेका थिए, होलीको अघिल्लो दिन जन्मिएको होस्। त्यसैले उनलाई गते कहिल्यै राम्रोसँग याद भएन। सुरुसुरुमा होलीको अघिल्लो दिन जन्मदिन भन्थे। पछि पछि त होलीको दिन भन्न थाले। जन्मदिन पनि होलीकै दिन विशेष रुपमा मनाउँछन्। त्यसैले करिश्माको घरको होली विनोदको ‘बर्थडे पार्टी’ पनि हो। विनोद पनि फिल्मक्षेत्रकै भएकाले करिश्मा र उनका साथी मिल्छन्।
होलीले करिश्मा र विनोदका आफ्ना साथीसँग मात्र जमघट गराएको छैन। साथीका साथीहरुबीच वर्षौंपछि भेटिएका थुप्रै उदाहरण छन्। होलीका बेला कोही काठमाडौं आइपुगेको छ भने ‘करिश्माको घर गए सबै भेटिन्छन्’ भन्ने लाग्छ धेरैलाई।
यसरी होली मनाउन थालेदेखि करिश्माको घरमा दुई वर्ष होली कार्यक्रम भएनन्। पहिले उनी अमेरिका बस्दा पनि धुमधाम मनाइएन। फागु शब्दप्रति उनीहरुको मोह यतिसम्म छ, फिल्म निर्माणमा करिश्माको लामो समयपछिको कमब्याक फिल्मको नाम पनि ‘फागु’ थियो। फागुको सुटिङ पनि फागुपूर्णिमाकै बेला परेको थियो। त्यतिबेला उनीहरु वीरगन्जमा थिए। फागुका दिन करिश्मा के चुप लागेर बस्थिन्, सुटिङ टोली बसेको होटललाई नै फागुमय बनाइदिइन्।
गत वर्ष फागुकै बेला उक्त फिल्म रिलिज भयो। त्यतिबेला करिश्मा दोहोरो परीक्षामा थिइन्। एउटा, लामो समयपछि निर्माणमा फर्किएको फिल्म र अर्को राजनीति।
फागुनमा रिलिज भएको फिल्म फागुले दर्शकका आँखा हलका पर्दासम्म खिच्न सकेन। राजनीतिमा उनी अझै परीक्षाकै चरणमा छिन्। उनको फागुघर भने आकर्षक थलो बनिसकेको छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, फाल्गुण २९, २०७३ ११:५०:२२